Sida loo raaxayn Lugood maktabadda sida fudud
Todobaadkii hore, mid ka mid ah saaxiibadeyda ayaa wuxuu ii weydiiyay su'aal aan si daacad ah la rumeysan yahay ahaa funny in la bilaabo. Waxa uu sheegay in, "music folder My lahaa heesaha qaarkood tirtiray iyo kuwa cusub ee ku daray. Sidee baan u heli Lugood si aad u cusboonaysiiso maktabadda arrintan xog cusub? Gaar ahaan meesha laga saaro heesaha oo ka maktabadda Lugood in ay yihiin mar dambe ma jiraan on my PC? "Waa hagaag, ma aad ogolaato in codadka lagu qoslo in la yaaban sida lagu heli Lugood, software cajiib ah ka ah ka sii la yaab leh shirkadda, Apple, si ay u raaxayn ay u gaar ah? Mid ka mid ah lahayd in waa in hidi fudud feature in Lugood ama wax quruxsan fudud in la sameeyo ugu yaraan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku ahayd lama filaan ah in ay ogaadaan in Lugood ayaa fikradda ma daawashada gal ah. Maxay ka dhigan tahay in uu yahay in aan kaliya 'helid' ay u gaar ah oo ka eegi kartaa on files. , Inta jeer ee ikhtiyaarka kaliya ee haray waa in ay gacanta u heshaan faylasha maqan iyo kaxeeyo. Waa hagaag, ha ka welwelin maadaama aan doorasho kale oo aad u ka dhigi doonaa shaqadan super fudud. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku qor doonaa dhammaan hab oo kala duwan halkan qof kasta.
Talaabada 1: Dooro dhammaan faylasha iyo markaas oo dhan oo iyaga ka soo xulay, bedelaan rating.
Talaabada 2: Hadda, soocaan faylasha ay rating. Oo ah kuwa aan la heli karo, tusaale ahaan tirtiray, waa in hadda la wada tusay, oo aad iyaga saari karin Lugood ay iyaga xulashada iyo iyaga la tirtiro.
Fiiro gaar ah: - Mid ka mid ah arrinta weyn oo habkan waa in baabbi'in lahaa oo dhan ratings iyo waxaa halkan ka ma ogtahay sida ugu wanaagsan ee qabowjis maktabadda Lugood ee.
Tallaabada 1: Soo hel gal ku yaalla bartanka folder Lugood Media, ku tilmaamay "Si toos ah Add to Lugood '.
Talaabada 2: Mar kasta oo aad ka soo dejisan music cusub hadda ka dib, si fudud meel faylasha bixi galkan. Qoraalkan soo sheegnay waxaa daawaday Lugood iyo wax kasta oo music cusub oo uu ku daray in ay galkan waxaa si toos ah intaa ku daray in maktabadda Lugood aad.
Fiiro Gaar ah - helin xal stop farqiga kaliya sida u kordhiyaa shaqada aan loo baahneyn oo i ciidamada in ay isticmaalaan hal folder khaas ah si ay u sii music oo dhan.
Tani waxaa ay ii habka jecel qabowjis maktabadda Lugood tan iyo markii ugu horeysay ee Waxaan u imid inaan ogaado waxa ku saabsan.
Talaabada 1: Download oo ka rakib TunesGo Wondershare
Riix halkan si dejisan iyo rakibi Mac ama Windows version of TunesGo. Waxaa markaas Launch. Lugood sidoo kale laga bilaabi doonaa. Markaas, TunesGo waa in lagu muujiyaa xaqa ka Lugood.
Talaabada 2: Nadaafadda Lugood Library
Riix badhanka 'Nadiifinta Lugood Library'. Markaas, TunesGo si toos ah loo ogaado doonaa Lugood Library oo uu ku tuso natiijooyinka la heeso iyo gabayo nuqul la ID maqan 3 macluumaadka. Riix 'Nadiifinta' doorasho. In wada hadal pop-up ah, guji "Nadiifinta 'mar kale. Markaas, TunesGo bilaabi doona maktabadda Lugood nadaafadda.
Fiiro Gaar ah - Tani waa habka ugu fudud ee dhiig maktabadda Lugood aad, iyada oo aan wax khataraha ku lug leh iyo sidoo kale halkan ka aan ku talinaynaa in aad oo dhan inay. La taga TunesGo ka Wondershare iyo isbadbaadi dhibaato badan. Rajaynaynaa in aad haatan ku riyaaqi doonaa dhiig maktabadda Lugood aad kaliya aniga oo kale.
> Resource > Lugood > Sida loo raaxayn maktabadda Lugood